R/W Farmaajo oo wareysi siiyay VOA
R/W Max'ed Farmaajo oo haatan ku sugan Abu-Dhabi ayaa ka hadlay safarkiisii Maraykanka, xilliga kala guurka iyo dagaallada Muqdisho.
Ra'iisul-wasaaraha DKMG ee Somalia, Max'ed C/laahi Farmaajo ayaa ka hadlay safarkii uu dhawaan ku yimid dalka Maraykanka ee uu kaga qeybgalay kulankii gaarka ahaa ee looga hadlayay xaaladda Somalia ee ka dhacay xarunta QM ee magaalada New York. Ra'iisul-wasaaruhu wuxuu sheegay in beesha caalamku ay xukuumaddiisa u balanqaadey taageerro ku aadan dagaallada ay kula jirto kooxda Al-shabaab.
Max'ed Farmaajo, wuxuu sheegay in beesha caalamku ay diideen oo ka horyimaadeen muddo kordhista uu baarlamaanka Somalia samaystay, waxayna taa badalkeeda soo jeediyeen in la dhameeyo muddada KMG isla markaana la qabto doorashooyinka lagu soo doorto madaxweyne iyo guddoomiye baarlamaan oo cusub. Farmaajo wuxuu sheegay in xukuumaddisu ay wado qorshihii arrimahaasi lagu hirgalin lahaa sidoo kalena ay wadatashiyo kala sameyn doonto talaabooyinka la qaadayo xilliga kala guurka.
Mar la weydiiyay inuu ka mid noqon doono musharixiinta isu soo taagaya madaxtinimada Somalia, Farmaajo wuxuu cadeeyay inaanu isagu diyaar u ahayn isla markaana doonayn inuu ka mid noqdo musharixiinta madaxtinimada ka qeybgali doona haddii doorashooyinka la qabto.
Ugu danbeyntii ra'iisul-wasaare Farmaajo wuxuu sheegay in xukuumaddiisu ay guullo ka gaadhay dagaallada ay kula jirto kooxda Al-shabaab, wuxuuna sheegay in dagaalkaasi uu sii socon doono ilaa laga gaarayo guullo kama danbeys ah.
VOA: Wareysi Dheer R/W Farmaajo